mhepo turbine sei kuti magetsi?
Mhepo anoramba mashizha kumativi; ichi Muruoko rwake anobata chirukiso nomubato, iro rinobatanidza kuti jenareta. A jenareta unobereka zvemagetsi simba kubva zvokuimba simba.
Chii Ukuru mhepo turbine ndinofanira?
Izvi zvinoenderana simba rako kudiwa. Tapota verenga zvako Max yemagetsi kudyiwa pazuva. Paavhareji, mumwe American musha randinenge hungada diki turbine pamwe 5kw kana 10kw turbine.
Ndechipi avhareji payback nguva?
Kureba payback nguva kunobva turbine, kunaka mhepo pa installation site richikunda magetsi rates, uye iripo mari uye incentives. Zvichienderana izvi nezvimwewo, nguva inoitika uzonyatsotanga mari mhepo turbine duku kunogona kutora pose kubva 6 kusvika 30 makore.
Sei duku mhepo enyika akaramba?
Urongwa inspections anoteererwa kamwe pamakore mashoma ose ari turbine wacho 20 + -year lifespan. A nyanzvi installer kana vakadzidziswa mukoti (kazhinji mugadziri kana munyengeri vaitengesa turbine) anoramba ari turbine uye shongwe kuburikidza mumuviri inspections, kunyange zvazvo vamwe turbines zvinogona kuongororwa ari kure kubva kombiyuta musha.
Ko Handifaniri kuronga mvumo?
Small Wind Energy zvivako kungada kuronga mvumo uye nguva dzose unofanira kubvunza simba vemo. Yose zvayo, nyika kuronga policies anotsigira kukura pamwero muduku Wind Energy.
Ko mhepo turbines ruzha?
Small wedu Wind Turbines kunge yakagadzirwa kunyarara chaizvo Somuenzaniso nokuita zvakananga ngarurege gadziriro kudzivisa giya bhokisi ruzha uye kuwedzera kunyatsoshanda. Kazhinji, mhepo pacharo rinoita zvakawanda ruzha kupfuura mhepo turbine. Zviri sezvisingaiti kuti chero ruzha kubva Small Wind Turbines kuchanzwika panguva dzinopfuura 30 m. Mubvumo riri mumunda kumativi 40-50 db (A).
zvitsigiso 7.What mhando Ungapa pamusoro-panzvimbo chokugadza?
Tisati naro, tinenge kupa zvose rwokugadzira Chinyorwa. Zvichakadaro tinogona kutuma mukoti aizotungamirira installation.
8.How Ndinogona kusarudza zvine hurongwa?
Kana basa rako riri kure kuruzhinji afoot network, zvino unogona kufunga kure afoot hurongwa.
Kana iwe chete tariro kuderedza yemagetsi rates, zvino unogona kufunga pamusoro afoot hurongwa.
Kunze kwavari, tinogona kupa micro afoot / Telecom yemapurisa mhepo rezuva chemasanganiswa hurongwa maererano nemamiriro ezvinhu akasiyana-siyana.
9.Maybe Ndinogona chete kutenga zvimwe zvinoumba akafanana chipande, inverter, uye shongwe?
Hongu unokwanisa. Chero kufanana chirongwa, kugamuchira mugove nesu.
Kunze firimu, chii chimwe ungaitei?
Tinogona anokonzera design, pachisara kukarukureta, kugadzwa uye basa.